मन छुने भिडियो : आफ्नी आमाको मलामी कोहीपनि नगएपछि छोराले पुर्याए साइकलमै राखेर घाट ! - Hamro Abhiyan
मन छुने भिडियो : आफ्नी आमाको मलामी कोहीपनि नगएपछि छोराले पुर्याए साइकलमै राखेर घाट !
यो संसारमा घुम्दै जादा धेरै स्वार्थी र घमण्डी मान्छेहरु मात्र भेटिन्छन् । किनभने यहाँका मानिसहरु धेरै आफ्नो लागी मात्र सोच्दछन् , गर्दछन् र हिड्दछन् । त्यसैले यहाँ जातिय , लैगिंक , भाषिक जस्ता विभिन्न नाममा मान्छेले मान्छेलाई पशु सरहको व्यवहार गर्दछ ।
जुन व्यवहार देख्दा लाग्दछ ,त्यो व्यक्ति मान्छे होइन् । तर एक मानव भएर यो संसारमा आएपछि मानवताको भाव व्यक्त गर्नुपर्दछ । आज हामी त्यस्तै एउटा दुखदायी घ’टना सुनाउन गइरहेका छौ । जसले तपाईको मनको आँखामा दुख्छ ।
यो घ’टना भारतमा बस्ने एक सरोज नामको युवकको हो । उनको परिवारमा आमा र छोरा बस्थे । परिवार राम्रैसँग चलेको थियो , सुख नै थियो । तर दैवको लिला एक दिन सरोजको ४५ वर्षीय आमाको पानी लिन जादाँ बाटोमा लडेर मृ’त्यु भयो । त्यसपछि सरोज पिडामा छट्पटाउदै आमाको दाहासंस्कारको लागी छिमेकीहरुलाई मलामी जान बोलाउन गयो । तर सरोज सानो जातको भएको भन्दै कोही पनि मलामी गएनन् ।
त्यसपछि सरोजले आफै आफ्नी आमाको शवलाई साइकलमा राखेर ५ किलोमिटर टाढा रहेको जङ्गलमा पुर्याएर एक्लै खाल्डो खने। त्यहि आमालाई पुरेर अन्त्यष्टिको काम सकाए ।
त्यसपछि यस घटनाको भिडियो एक व्यक्तिले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेको थियो । अहिले उक्त भिडियो भाइरल भएको छ । र यस घ’टनाको भारतमा धेरै आलोचनाका साथै मानवता माथि प्रश्न उठेको छ ।
प्रधानमन्त्रि ओलीले खाए झापा, नेपाल निल्ने यस्तो योजना ! चार खुट्टेबाट जोगाए दुई…
‘आमा र मामा एउटै कोठामा बस्दा म अर्कै कोठामा बसेर रुन्थे’